आमा की श्रीमती ? - Enepalese.com
नबिन बिक , गोन्जाउ ,चीन २०७६ भदौ १६ गते १२:२८ मा प्रकाशित
नबिन बिक , गोन्जाउ ,चीन । “ आमा “ शब्द सबै भन्दा प्यारो र सबै भन्दा नजिक लाग्ने शब्द हो भने, आमा जस्तो नजिकको र मायालु ब्यक्ती संसरमा कोही हुदैन । आमा जतिसुकै नपढेकी भएपनि , जति सुकै नराम्री भएपनि आमा जस्तो असल शिक्षिका र आमा भन्दा राम्री अरु कोही लाग्दैन,। सानो भ्रुण देखी तातो, चिसो, ठक्कर, देखी बचाउदै बचाउदै नौ महिनामा ३ -४ किलोको हस्टपुष्ट बालक यो धर्तीमा जन्माउने महान काम आमाले गर्छिन । जब बच्चा जन्मीन्छ तब आमाको जिम्मावारी झन बढेर आउछ । घरको काम काज सम्हाल्नु , बोल्न नसक्ने तर रुन मात्रै सक्ने , छिन छिनमा दिसा र पिसाबले बिस्तारा भिजाउन मात्र सक्ने बच्चाको स्याहार सुसार गर्नु र उसको रुवाई पनि बुझेर उसलाई फुलाउन सक्नु कुनै साक्षात देवीले मात्रै गर्न सक्छन।
मेला पातामा जादा होस वा भान्छामा पसेर अरु परिवारको लागी खाना पकाउदा होस, वा आँगन बढाल्दा होस आमाले जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि एक छिन छोडदिनन् । बरु बच्चालाई पिठ्युमै बोकेरै भए पनि घरधन्दा गर्न भ्याउछिन । खाना ख्वाईदिने,नुहाई दिने, आची गरिसेकसी आची सफा गरिदिने, मिठा मिठा कथा हालेर राजकुमार बनाएर छिन भरमै सुताउईदिने परी केवल आमा मात्रै हुन सक्छिन।
कुनै दिन खाना अपुग भएमा अनेकौ बहना बनाएर खान मन लाको छैन वा अघाएको छु भनेर आफु भोकै बसेर पनि आफ्नो सन्तानको पेट भर्ने कोही भगवान छन भने ति केवल आमा हुन । माछा मासु पकाउदा हातले छामी छामी कमलो हड्डी नभएकाे मासु मासु छानेर खुवाउने महान काम आमा बाहेक अरुले सोच्न पनि सक्दैन । कहिले काही बच्चा बिरामी भयो भने आमा रात भरी जागै बस्छिन । छिनमा निधार छाम्ने, पानि पट्टी लाउने काम आमाले मात्रै गर्न सक्छिन ।
आमा हाम्री श्रृष्टीकर्ता हुन । हाम्री भगवान हुन।आमाको सानो त्याग र बलिदानले त्यसै आजको हामी भएका हैनौ । बरु नभ्याए मन्दिर चर्च र गुम्बा नजादा पनि हुन्छ तर समय समयमा आमाको दर्शन गर्न आफ्नो घर गाँउ जरुर जानुस । त्यहा तपाईको साक्षात भगवान बसेकी छन ।
श्रीमतीलाई म आमाको दोस्रो रुप मान्छु । जिन्दगी एउटा रिले दौड जस्तै हो । यो रिले दौडमा निश्चित समय सम्म आमाले हाम्रो लागी दौडीनु हुन्छ । एउटा निश्चित समय वा बिन्दु पश्चात आमाले श्रीमतीको हातमा जिम्मा लगाईदिनु हुन्छ र श्रीमती हाम्रो लागी दौडीन थाल्छिन । पहिला आमाले खानामा के मन पर्छ के मन पर्दैन ? लाउन के मन पर्छ? कुन कपडा मैलियो, मोजा कहा छ? टावल कहा छ?
सबै आमाले नै ब्यबस्था गर्नु हुन्थ्यो अब श्रीमतीको पालो । पहिला म सानो छदा मेरी आमाले जे जे गरिदिनु हुन्थ्यो त्यो सबै अब मेरी श्रीमतीले मेरो लागी गर्छिन । मलाई के सब्ज़ी मन पर्छ? कुन रङ मन पर्छ मात्रै होईन उनी मेरो मन पर्ने र नपर्ने चीज संगै उनले पनि रोजाई परिबर्तन गर्छिन । पराई घरबाट एक्कासी पतिको घरमा आएर, पतिको थर देखी पतिको डर सम्म स्विकारेर आफ्नो संसार बसाउछिन ।
खाना पकाउने , लुगाधुने, घर सफाई गर्ने, लुगा आईरन गर्ने र श्रीमान कति खेर आउनुहुन्छ । र संगै खाना खाउला भनेर कुरेर बस्ने र कहिले काही नमिठो भएमा, नुन चर्को भएमा वा खुर्सानी धेरै भएमा गाली खादा पनि पति प्रति कुनै पुर्बाग्रह नराखी निश्चल मनले हास्दै टेवलमा बसेर साथदिने काम केवल श्रीमती नामकी देवीले मात्रै गर्न सक्छिन ।
श्रीमतीहरु जब बयस्क हुन्छन । जब बिहे गरेर घर भित्रिन्छन तब उनीहरु पनि राम्रै हुन्छन । फेसबुक र टिकटोकमा भेटिएका केटीहरु भन्दा कम हुदैनन। रुपमा, फिगरमा, कामुकतामा…तर जब जब घर ब्यबहारले थिच्दै जान्छ तब उनीहरु समय भन्दा पहिल्यै परिपक्क र म्याचुएर हुन्छन । जसरी हाम्री आमाले मृत्युको मुखमा पुगेर हामीलाई यस धर्तीमा ल्याईन ।
त्यसरी नै हाम्रो श्रीमतीले पनि मुत्यु संग पौठेजोरी खेल्दै हाम्रो बंश यो धर्तीमा ल्याउछिन । अझ बच्चा पाउने भएसी एक फिट सम्म तन्किएको पेट, सुन्निएका हात खुट्टा बस्नलाई र शरिरको आकार पहिलाको जस्तो हुन दशकौ लाग्छ किनकी २-३ वटा बच्चा नपाउने महिला सायदै हुन्छन ।
उनीहरु आफ्नो रुप , फिगर वा जीवनकै पनि प्रवाह नगरी हाम्रो घर खुशीले भर्न पछि पर्दैनन । २-३ चोटी सम्म नर्मल डेलीभरी गर्नु वा हरेक चोटी एक एक बित्ता पेट चिरेर बच्चा जन्माउनुको पिडा । सानो प्वाल पारेर वा चिरेर परिवार नियोजन गर्न डराएर तिन कोस पर भाग्ने पुरुषले कहिल्यै बुझ्नसक्ने छैनन।
हाम्रो माया,हौसला र केयर नै श्रीमतीको एन्टी एजीङ क्रिम हो । श्रीमतीलाई सधै खुशी तरुनी, राम्री र स्वास्थ देख्न चाहनुहुन्छ भने यस्तो क्रिम लगाउन कहिल्यै कन्जुसाई नगरौ ।
हामी पुरुषहरु आफुले पैसा कमाएर घर चलेको मा घमन्ड गर्छौ र मैले गर्दा नै यो घर चलेको छ भनेर दम्भ गर्छौ । तर धेरै पुरुषलाई एउटा तितो सत्य थाहा नहुन सक्छ । मौका दिए पैसा त महिलाले पनि कमाउन सक्छन तर पुरुषले चाहेर पनि घर चलाउन सक्दैनन ।
यस्को ज्वलन्त उदाहरण हो श्रीमती खसेको बर्षदिन नबित्दै दोस्रो श्रीमती बिहे गर्नु । बैस मातेर भन्दा पनि जिन्दगी नै अस्त ब्यस्त भएर हो । ५० कटेसी पनि पुरुषले जीबन साथी खोज्नु । श्रीमती भनेकी एउटा बृक्ष जस्तै हुन । जस्ले सितल छहारी दिन्छिन, फल दिन्छिन, हामीलाई चाहिने अक्सिजन दिन्छिन ।
जति धेरै यो बृक्षलाई हामीले स्याहार र जतन गर्न सक्यो त्यति धेरै फल र सितल छहारी हामीलाई दिन्छिन,। हामी त अफिस बाट हप्तामा १ दिन छुट्टी पाउछौ। तलब पाउछौ तर आमा र श्रीमती यस्ता पात्र हुन जस्ले आजीबन नत छुट्टी पाउछन नत्र तलब नै पाउछन ।
केवल मिठो बोलिदिएर र अलिकति माया गरिदिए पु्ग्छ, त्यति गर्न पनि हामी किन कन्जुसाई गर्छौ ? आमा र श्रीमती भनेको हामीले जिन्दगीनामा जति तिरे पनि कहिल्यै तिरेर तिर्न नसकिने गुनलगाउने साक्षात देवी हुन।
सम्पुर्ण देश बिदेशमा रहनु भएका सम्पुर्ण महान आमा तथा चेलीबेटी हरुलाई हरितालिका तिज पर्बको लाखौ लाख शुभकामना 💐💐🙏🏼🙏🏼🙏🏼।
नबिन बिक , गोन्जाउ, चीन